Armenia oo muujisay in looga gacan sarreeyo dagaalka Karabakh & xabbad joojin ay diidanayd oo ay ogolaatay (Xeel ku jirta) | Hadalsame Media
Home Wararka Armenia oo muujisay in looga gacan sarreeyo dagaalka Karabakh & xabbad joojin...
Armenia oo muujisay in looga gacan sarreeyo dagaalka Karabakh & xabbad joojin ay diidanayd oo ay ogolaatay (Xeel ku jirta)
(Baku) 03 Okt 2020 – Ciidanka Azerbaijan ayaa sheegtay inay meelo muhim ah ka qabsadeen galbeedka Gobolka Aghdara oo ka tirsan Nagorno-Karabakh xilli uu dagaalku galay maalintii 7-aad oo ay muuqato in Armenia looga gacan sarreeyo.
Wasiirka Gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sheegay inay Ciidanka Armenia ay sidoo kale khasab kaga dhigeen inay ka baxaan gobolka Jabrayil-Fuzuli iyo dhul taag ah oo ka tirsan Madagiz.
Wuxuu intaa raaciyey in ay habeenkii duullaan qorshaysan ku burburiyeen ilaa 5 gaari oo gaashaaman oo ay wateen Ciidanka lugta ee Armenia oo uu sheegay inay askar badan ka dileen, isla markaana ay gacanta ku dhigeen hub iyo rasaas fara badan, kuwaasoo ay ka ordeen Ciidanka Armenia, sida ku dhigan Anadolu Agency (AA), waxaa gaadiidka laga qabsaday ka mid ah Uraallo casri ah oo uu Ruushku sameeyey 2019-kii.
Dhanka kale, Armenia oo bilowgii marna ku goodinaysey inaysan xabbad joojin ogolayn marna Turkiga eedaynaysey ayaa haatan sheegtay inay ogoshahay xabbad joojin ay la gaarto Azerbaijan.
Armenia ayaa sheegtay inay la shaqaynayso 3-da dal ee Faransiiska, Ruushka iyo Maraykanka oo wada guddoomiye Ururka Amaanka iyo Iskaashiga Yurub (OSCE) ama Minsk Group, oo la asaasay 1992-kii si ay u dhexdhexaadiyaan Azerbaijan iyo Armenia oo isku haya gobolka buuraleeyda ah ee Nagorno-Karabakh ee Koonfurta Qoowqaasiya.
Nasiib xumo, ururkan Minsk Group dhexdhexaad ma aha oo wuxuu si dadban iyo si toos ahba u ilaaliyaa danta Armenia oo ku faanaysa cududda Ruushka iyo taageerada daaha gadaashiisa ah ee Galbeedka oo wada jira, sidaa darteed, xabbad joojinta ay Armenia qaadatay waa mid aan wada daacad ahayn.
Previous articleHaweenay dhimatay 24 sanadood kahor oo saadaalisay inuu ”Trump ku dhacayo cudur halis ah oo maskaxdiisa wax u dhimi doona” (Waxyaabaha kale ee ay saadaalisay)
Next article”Turkigu ka laba-labayn maayo inuu taageero Azerbaijan” – Wasiir Dibadeedka Turkiga